Daawo sawirada Xarakada al Shabaab oo sameeyay dhoolatus Milatari |
Daawo sawirada Xarakada al Shabaab oo sameeyay dhoolatus Milatari
Xarakada Al-Shabaab ayaa dhoolatus milateri kusoo bandhigay deegaano ka tirsan Gobalka Shabeelaha hoose halkaasi oo ciidamo badan oo Shabaab ka tirsan dhoolatuska dhiilada dagaalka ku dheehan tahay ku muujinayeen.
Guddoomiyaha Al-Shabaab ee Gobalka Shabeelaha hoose Sheekh Maxamed Abuu Cabdala ayaa sheegay in ciidamada ay yihiin boqolaal ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab inkastoo uusan cadad gaar ah sheegin hadana wuxuu tilmaamay inay diyaar u yihiin ka qeybgalka dagaalka dalka ka socda.
Wuxuu ku dhiiragelinaye ciidanka inay kuwa kasoo horjeeda ugu tagaan furumaha dagaalka iyaga oo aan cidna ka baqeyn xabada dagaalkana aan dhabarka aadineyn.
Muuqaalo sawiro ah oo lasoo dhigay baraha internetka ee Shabaabka ay isticmaalaan ayaa lagu muujinaye ciidan ka tirsan Shabaabka oo wata qoryaha dagaalka noocyadooda kala duwan iyo gaadiidka ay saaran yihiin qoryo waaweyn.
Al-Shabaab oo waayahan dambe luminaye deegaano iyo Degmooyin ka tirsan Gobalada dalka Soomaaliya ayaa dhoolatuskaan ku muujinaye inay weli jirto awoodii dhanka dagaalka ee Al-Shabaab.